भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा - Karobar National Economic Daily
भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा
query_builderSeptember 14, 2017 8:30 AM supervisor_accountप्रा. डा. कमलराज ढुंगेल visibility548
परापूर्व कालदेखि नेपाल एउटा परजीवी मुलुकका रूपमा चिनिँदै आएको छ । परजीवी अर्थतन्त्रको स्वरूप र आकारमा भने विभिन्न समयमा फरक पर्दै आएको कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूले सावित गरिरहेका छन् ।
यो परनिर्भरता ऐतिहासिक कालदेखि नै भारतसँग एकलौटी रूपले रहेको कुरा विभिन्न आँकडाले पुष्टि गरिरहेका छन् । सन १९७० र सन् १९८० का दशकहरूमा व्यापार विविधीकरणले प्राथमिकता पाएको थियो । यो अवधिमा भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता ७०–८० प्रतिशतबाट घटेर ३०–३५ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको थियो ।
यो कदमले नेपालको व्यापार भारतबाहेक संसारका अन्य मुलुकहरू विशेष गरेर चीनसँग विस्तार हुन पुगेको थियो । यस अवधिमा चीनसँग नेपालको व्यापारमा विस्तार गराउनुमा कोदारी राजमार्गको पनि महŒवपूर्ण योगदान रहेको थियो । यो कदमले केही हदसम्म व्यापारको हिस्सा भारतसँग ह्रास भएको थियो भने अन्य मुलुकसँग वृद्धि । यसले भारतसँगको व्यापारघाटाको आकार घटाउन मद्दत गरेको थियो ।
फलस्वरूप भारतीय मुद्राको नेपालमा हुने मागलाई पनि केही हदसम्म कमी ल्याएको थियो । यद्यपि भारतसँगको व्यापारघाटा र भारतीय मुद्राको मागमा भने कमी आउन सकेको थिएन ।
वर्तमानमा आयातको अवस्था
नेपालमा उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन हँुदैन । निर्माण सामग्रीदेखि लिएर सवारी साधन र ऊर्जा तथा खाद्यान्नका विभिन्न वस्तुको आयात हुने गर्छ । चुरे पर्वतका सानातिना खोलानालाहरूमा रहेको गिट्टी–बालुवाको अन्धाधुन्ध रूपले दोहन गरी निर्यात हुने गरेको छ । मधेसलाई जलाम्य बनाउने धेरै कारणमध्ये यो पनि एउटा प्रमुख कारकका रूपमा रहेको छ ।
यसले के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको निर्यात व्यापारले गति लिन सकेको छैन । निर्यात व्यापारमा विस्तार गर्न नेपालमा रहेका सम्भाव्य स्रोतहरूको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपाल आफैं निर्धन मुलुक हो । उपलब्ध स्रोतको विकास गर्न पर्याप्त पुँजीको आवश्यकता पर्छ । यसका निम्ति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्छ ।
नेपालले यसका निम्ति आवश्यक पर्ने विभिन्न सर्त पूरा गर्न सकिरहेको छैन, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकोस् । विगत पाँच वर्षमा नेपालको आयातको स्थिति भारत र अन्य मुलुकहरूसँग कस्तो थियो भन्ने तथ्यलाई तालिकामा देखाइएको छ ।
आयात (प्रतिशत) व्यापारघाटा (प्रतिशत)
आर्थिक वर्ष​ भारत अन्य भारत अन्य
२०१२–१३ ६५.९ ३४.१ ६५.९ ३४.१
२०१३–१४ ६६.९ ३३.१ ६७.२ ३२.८
२०१४–१५ ६३.५ ३६.५ ६३.२ ३६.८
२०१५–१६ ६१.७ ३८.३ ६२.२ ३७.८
२०१६–१७ ५९.३ ४०.८ ६५.३ ३४.७
स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण
प्रस्तुत तालिकाबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको आयात व्यापारको निर्भरता भारतसँग बढ्दै गइरहेको छ भने अन्य मुलकसँग ह्रासोन्मुख छ । यसले के देखाउँछ भने भारतसँगको आर्थिक निर्भरता तीव्र गतिले वृद्धि भइरहेको छ । यसो हुनुमा धेरै कारण छन्, जसको तलका हरफहरूमा छोटकरीमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरिएको छ :
१. राजनीतिक अस्थिरता :
सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको उदय भयो । नेपालले उदारीकरण आर्थिक प्रणालीलाई अंगीकार ग¥यो; अर्थात् अर्थिक क्रियाकलापहरूमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहन थाल्यो । अझ अर्को शब्दमा भन्दा आर्थिक विकास निजी क्षेत्रको पहलमा निर्भर हुन थाल्यो ।
आर्थिक विकासका लागि सरकारको भूमिका सहजकर्ताका रूपमा सीमित हुन पुग्यो । देशभित्र आवश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादनका निम्ति उद्यमशीलताको आवश्यकता पर्छ । उच्चस्तरको उद्यमशीलता हुँदा आर्थिक जगत्मा निजी क्षेत्रले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उद्यमशीलतालाई परिचालन गर्न सही निति र कार्यनीतिको आवश्यकता पर्छ ।
यसका निम्ति राजनीतिक स्थिरता पहिलो सर्तका रूपमा रहेको हुन्छ । सन् १९९० को दशकदेखि हालसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको कारणले निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थव्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सकेन । उद्यमीहरू वस्तु उत्पादनमा हुने जोखिममा जान विशेष गरेर राजनीतिक अन्योलले छेकिरहेको छ । यसका सट्टा उद्यमीहरू पनि वस्तु आयात गर्नतिर उन्मुख हुन लागे । वस्तु आयात गर्ने देश भारतमै केन्द्रित भएको तथ्य आँकडाले बोलिरहेका छन् ।
२. भौगोलिक सामीप्य :
भूगोलका हिसाबले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अत्यन्त सहज छ । नेपाल र भारतबीचमा खुला सिमाना रहेको छ । दुवै देशका नागरिक बिनारोकटोक दुवै देशमा आउन–जान सक्छन् । यसले नेपालका व्यापारीहरूलाई वस्तु आयात गर्न कुनै प्रकारको बन्देज छैन ।
व्यापारीहरू सीधै भारत गएर वस्तु आयात गर्न सक्छन् । अन्य देशबाट नेपालमा वस्तु आयात गर्दा भारतको भूमि नै प्रयोग गर्नुपर्ने कारणले पनि सोही प्रकृतिका वस्तुहरू भारतबाटै आयात भइरहेको छ । यो सहजताको कारणले पनि नेपालको व्यापार भारतसँग आश्रित भएको छ भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला ।
३. सामाजिक र धार्मिक निकटता :
नेपाल र भारतको सामाजिक र धार्मिक निकटता अत्यन्त गाढा छ । भाषा, धार्मिक परम्परा, सामाजिक मान्यता, सबै एक–अर्कासँग सम्बन्धित मात्र होइन कि मिल्दाजुल्दा पनि छन् । यी सबै परम्परामा नेपालीहरू भारततर्फ जाने गर्छन् ।
यसका निम्ति नेपालीहरूलाई भारतीय रुपैयाँको आवश्यकता पर्छ । यो प्रयोजनमा भारतको यात्रा गर्दा नेपालीहरूले व्यक्तिगत वा व्यापरिक प्रयोजनका निम्ति भारतबाट सामानहरू ल्याउने गर्छन् । यसले पनि नेपालको व्यापार भारतमुखी बनाउन मद्दत गरिरहेको छ ।
४. रोजगारीको स्रोत :
नेपालका अर्धदक्ष र अदक्ष मानव संसाधनका निम्ति भारत परापूर्व कालदेखि रोजगारीको स्रोत रहँदै आएको छ । घरायसी कामदारदेखि लिएर सैनिकसम्मका क्षेत्रहरूमा नेपालीहरूले भारतमा रोजगारी प्राप्त गर्दै आइरहेका छन् । यो रोजगारीबाट नेपालीहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा ज्याला प्राप्त हुन्छ । यो ज्यालाको मुख्य हिस्सा वस्तु आयातमै खर्च हुने गर्छ । यसले पनि नेपालको आयात भारतमा निर्भर गराउनमा मद्दत गरेको छ ।
५. प्रतिस्पर्धाको कमी :
शबाट नेपालमा आयात गर्दा सो वस्तुहरूले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । अन्य देशबाट आयातित वस्तु भारतबाट आयातित वस्तुभन्दा महँगो पर्छ । उदाहरणका लागि नेपालले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने हो भने भारतबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थभन्दा महँगो हुन सक्छ । यसकारणले पनि नेपालको व्यापार भारतमुखी भएको हो ।
६. खासा व्यापार :
२५ अप्रिल २०१५ को महाभूकम्पले नेपाल र चीनबीच हुने व्यापारिक नाका तातोपानीलाई तहसनहस बनायो । कोदारी राजमार्गको बाह्रबीसे–तातोपानी खण्ड भत्कियो । तातोपानी त जीर्ण नै बन्यो । यही नाकाबाट चीनसँगको व्यापारले मौलाउने मौका पाएको थियो । भूकम्पले तहसनहस बनाएको संरचनाले निर्माण हुने मौका पाएन । फलस्वरूप, चीनसँगको व्यापार प्रभावित भयो । यसले पनि भारतीय बजार नेपालका लागि उर्वर हुन पुग्यो ।
७. निर्यातमुखी वस्तुहरूको उत्पादनमा कमी ः
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको मात्रा भारतबाट आयात हुने वस्तुहरूको तुलनामा नगन्य छ । भारतका प्रान्तीय राज्यहरू बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराञ्चल र पश्चिम बंगाल नेपालका छिमेकी हुन् । भारतका यी प्रान्तीय राज्यहरूमा भारतको आधा जनसंख्याभन्दा बढीको बसोबास छ ।
यो जनसंख्याको भागलाई लक्षित गरी नेपालले आफूसँग रहेको स्रोत–साधनहरूको विकास गरी निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । यही प्रयोजनका लागि हेटांैडादेखि वीरगन्ज क्षेत्र र मधेसका सोही प्रकृतिका अन्य क्षेत्रहरूमा उद्योग विकासका लागि गुरुयोजना नै तयार गर्न आवश्यक हुन्छ । यो प्रक्रियाले गति लिँदा नेपालको लगानी मात्र आकर्षित हुने होइन कि भारत र अन्य देशका लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुन सक्छन् ।
नेपालको भूगोलको अवस्था एक देशमा मात्र सीमित छ ।
पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ भने उत्तरमा चीन । कोदारी राजमार्ग भुइँचालोको सिकार बनेको हुनाले चीनसँगको व्यापार निश्चित रूपमा कमी आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपले भारतमुखी हुन पुगेको छ । माथि उल्लेख गरिएका प्रत्येक बुँदाहरूले के प्रस्ट पार्छन् भने नेपालको व्यापार भारतसँग आश्र्रित छ । नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने वस्तुहरू खासै गहकिला छैनन् ।
भारतबाट नेपालमा आयात गरिने वस्तुहरू अत्यन्तै संवेदनशील छन् । पछिल्लो समयमा भएको नाकाबन्दीले नेपालीहरूको दैनिक जीवन कठिनपूर्ण बनाएको थियो । यस प्रकारका घटना दोहोरिने चरित्रका हुन्छन् । नेपालले यी घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्न भारतबाट लिने मात्र होइन, नेपालले भारतलाई केही दिन पनि सक्नुपर्छ ।
नेपालले भारततर्फ निकासी गर्ने यस्ता वस्तुको विकास गर्न सक्नुपर्छ, जसको अभावमा भारतीय जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न सकोस् । यसले डरलाग्दो नाकाबन्दीलाई सदाका निम्ति एकातिर बिदाइ गर्छ भने अर्कातिर भारतसँग रहेको कहालीलाग्दो व्यापारघाटा ह्रास गराउनमा मद्दत गर्छ । यसका निम्ति भारतलगायत अन्य मुलुकबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पर्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।)
भारत व्यापारघाटा अर्थतन्त्र व्यापार आर्थिक वर्ष